ပြည်သူတွေ ရိက္ခာစုထားဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်သလဲ ? – Shwe Thadin
ပြည်သူတွေ ရိက္ခာစုထားဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်သလဲ ?
09/06/2021 admin Knowledge 0
ပြည်သူတွေ ရိက္ခာစုထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရေးထားတဲ့ ကိုလင်းနစ်ရဲ့ ပို့စ်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရိက္ခာစုထားဆိုတာ ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်​ေတာ့ရယ်စရာပေါ့ဗျာ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စားလိုက်ရတော့မလားဘာညာနဲ့ လှောင်သလိုတွေတင်နေကြတာဟာ တစ်ကယ်မဖြစ်သေးလို့မကြုံဖူးသေးလို့ပါ ရိက္ခာစုဆိုတာ မြို့ကြီးတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
တစ်နိုင်ငံလုံးကိုပြောတာပါ ခုဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကို နမူနာကြည့်ကြပါ ဥပမာ- မင်းတပ် လိွုင်ကော် ဒီမော့ဆို စသဖြင့်ပေါ့ တစ်ကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါ စကစဘက်ကရိက္ခာလမ်းကြောင်း​တွေ​ြဖတ်တောက်တာ အလှုပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းတာတွေ လုပ်လာတာမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ
ဖြစ်လာမှ အဝေးကိုလှမ်းကူကြတာလည်းတစ်ပိုင်းပေါ့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ်ရွာလည်း ဘယ်အချိန်ဘာထဖြစ်မလဲမသိနိုင်တာမို့ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေက နိုင်သလောက် အမေ့ခံပြီး စုဆောင်းထားပေးကြပါ ဖြစ်လာရင် မစုထားနိုင်တဲ့သူတွေကို ပြန်မျှကူကြပါလို့
ဒီနေရာမှာ ဖြစ်နေကြတိုင်းရင်းသားဒေသတွေက အထူးတစ်လည်သတိပေးစရာမလိုအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါတယ် ဒေသတွင်းမှာတင်မကပဲ ဆုတ်ခွာမယ့်နေရာ တောထဲတောင်ထဲတွေအထိပါ ရိက္ခာကို ကြိုဖွက်ပြီးစုဆောင်းထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် ဒါကလည်း အတုယူစရာ ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့်တဲ့အချက်တစ်ခုပါ ပြည်မကလူတွေအတွက်က စစ်ပွဲနဲ့နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့မကြုံဖူးသေးတော့ ရိက္ခာစုဆိုတဲ့စကားဟာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ရယ်စရာဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဗျာ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ပြည်သူ၏တုံ့ပြန်မှု ပြင်းထန်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဝန်ခံ
မီးအိမ်ရှင်ဆရာဝန်မလေး A Nyein ပြောပြတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာနှစ်ခု အကြောင်း